Unique banner pole Abakhiqizi - China Unique banner pole Suppliers & Factory
I-T banner ingesinye sezibhengezo zomumo eziyingqayizivele, ezaziwa nangokuthi isibhengezo sika-sharkfin emazweni ambalwa.Zinomkhawulo ongaphezulu ogobile futhi cishe unomumo "we-teardrop".I-T banner iyindlela enhle uma udinga okuthile okufana nefulegi elaziwa kahle le-feather nomaisibhengezo esindizayoyokuthengisa ngaphakathi nangaphandle njengezinsuku zegalofu, imicimbi yokufaka uphawu lwemoto njll.
Ukukhangisa kwe-Magnum Banner, isitendi sesibhengezo esiyingqayizivele nesesitayela esinomumo wengilazi yewayini, kulula ukuhlanganisa nokuqaqa, ayisindi futhi aphathekayo, amathuluzi okubonisa athengekayo okufaka uphawu nokukhangisa.Kungakhathaliseki ukuthi ngaphakathi noma ngaphandle ngosuku olunomoya, i-flagpole eqinile yesibhengezo se-Magnum izoma futhi idonse ukunaka.
Isibhengezo sika-W siqanjwe ngesimo saso esihle samagagasi.Ukugoba kancane esigxotsheni kuqinisekisa ukuthi ifulegi le-wave lihlala libonisiwe futhi lilungele ukumaketha okuphromotha.isimo sesibhengezo singashintshwa njengeIfulegi le-Flutters.I-Pole eyenziwe nge-carbon composite material ingakuqinisekisa ukuthi usebenzisa isikhathi eside.Itholakala ngosayizi ongu-2.
U-U banner umumo oyingqayizivele onendawo enkulu yokubonisa.Ungaphrinta uhlangothi olulodwa noma olukabili ukuze ubonise imilayezo yakho.Kwenziwe ngezinto ezihlanganisiwe zekhabhoni kungakuqinisekisa ukuthi usebenzisa isikhathi eside.Kuyisinqumo esihle ukusabalalisa imilayezo noma ilogo yakho.
I-R banner ingesinye sezitendi zesibhengezo esiphathwayo esiyingqayizivele esinendwangu eqinile kanye nendawo yokuphrinta ebanzi.Ilungele ukubonisa okuvamile, amayadi emoto nemicimbi yasendlini noma ngaphandle.I-Pole eyenziwe nge-carbon composite material ingakuqinisekisa ukuthi usebenzisa isikhathi eside.Osayizi abathathu bayatholakala.
I-P banner idizayini eyingqayizivele onomumo oyisiyingi kanye nesibhengezo sendwangu esiqinile .Ungaphrinta uhlangothi olulodwa noma olukabili ukuze ubonise imilayezo yakho.Kwenziwe ngezinto ezihlanganisiwe zekhabhoni kungakuqinisekisa ukuthi usebenzisa isikhathi eside.Ilungele ukubonisa okuvamile, amayadi emoto nemicimbi yasendlini noma ngaphandle.